Umntwana wam uneempawu zomkhuhlane eziqale izolo. Ndenzeni? – Messages for Mothers
Umntwana wam uneempawu zomkhuhlane eziqale izolo. Ndenzeni?
Abantwana bathanda ukuba nohlobo oluphakathi lokugula lwe-COVID-19 ukuba bafumana usuleleko kodwa bangayisasaza lula kwabanye. Nanjengoko sisiya kwixesha apho kubakho imikhuhlane, abantwana bangathatha iintsholongwane ezizezinye kuneCorona ngeli xesha. Iimpawu ezenziwa zezi ntsholongwane zingafana ne-COVID-19.
Kufuneka uthathe amanyathelo kwantlandlolo ukunqanda i-COVID-19:
Hlamba izandla kangangoko unakho ngesepha imizuzwana engama 20 (okanye usebenzise isicoci esibulala iintsholongwane)
Ukuba uyancancisa, qhubeka uncancisa
Fundisa umntwana wakho ukuba azinqande ukubamba ubuso bakhe.
Fundisa umntwana wakho ucoceko lokuphefumla. Oku kuthetha ukuba khohlela okanye uthimlele kwikona yomphakathi wengqiniba yakho uvale umlomo kunye nempumlo okanye kwiphetshana elithambileyo nekufuneka lilahlwe kude kwinto evalwayo uze uhlambe izandla zakho ngesepha imizuzwana engama 20.
Ukuba umntwana wakho unomkhuhlane, uyakhohlela okanye unzinyelwe kukuphefumla, funa nenkathalo yezonyango ngokukhawuleza. Ukuze ufumane ingcebiso koko unokukwenza nokuba ungaya phi, dibana nenombolo engahlawulelwayo ye-COVID-19 ku-(0800 029 999/0800 111 132).
← Ndibakhusela njani abantwana bam xa ndiphuma ndisiya emsebenzini? → Ingaba abantwana abane-COVID-19 bangayisasaza intsholongwane kwabanye abantu?